जीवन चलिरहन्छ - अनवरत !
यहि कार्तिक २३ गते अर्थात नोभेम्बर ८ तारिखका दिन म २७ वर्ष पूरा गरी जीवनको २८ औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछु । यहाँसम्म आर्इपुग्ने क्रममा जीवनमा मैले अनेकौं तीतामीठा अनुभवहरू संगालेको पनि छु । ती अनुभवहरू सम्भवतः यहाँहरूका झैं पक्कै छैनन् । किन्तु, हाम्रा भोगार्इहरूले हामी सबैलार्इ एउटै पाठ चाँहि सिकाएको हुनुपर्छ - जीवन जिउने कला ! मेरो विश्वास छ, जीवनको अविरल यात्रामा हामीले सामना गर्नुपर्ने कैयन कठिन चुनौतीहरूले हामीलार्इ जीवन के हो भनेर बुझ्नलार्इ अझ प्रेरित गरेका छन् । हामी सधैं सुखभोग मात्र गर्दैनौं, हाम्रा लागि दर्दहरूको पनि आफ्नै महत्व छन् । सायद जीवनमा दर्द, विवशता र लाचारीपन नहुँदा हुन त बाँच्नुको पनि त महत्व नरहँदो हो ।
मैले आफ्नै जीवनलार्इ मिहीन पाराले बुझ्ने प्रयास गर्दै गर्दा के पाएको छु भने, जीवन सुन्दर छ र यसका थुप्रै अँध्यारा पाटाहरू पनि छन् । केहि मानिसहरू सधैं जीवनका उज्याला पाटाहरूलार्इ अङ्गाल्छन्, उनीहरू अँध्यारा पाटाहरू देख्तैदेख्दैनन् वा इन्कार गर्छन् । र, उनीहरू सधैं सुखी अनि खुशी हुन्छन् । खुशि यस अर्थमा कि अँध्यारोले जीवन छोपिरहेका बखत पनि उनीहरू परपर क्षितिजसम्म उज्यालाहरू पर्खिरहेका हुन्छन् । र यहाँ थुप्रै यस्ता मानिसहरू पनि छन् जो जीवनका उज्याला पलहरू बाँच्दै गर्दा खोतलखातल पारी अँध्याराहरू खोजिरहेछन्, फलतः उनीहरू सुखि हुन सकिरहेका छैन, जति उनीहरू हुनुपर्ने हो ! त्यसकारण, मानिसहरूले यो बुझ्नु जरूरी छ कि जीवन भनेको सुख र दुखको संगम हो ।
मलार्इ याद छ ती कठिन बाल्यकालहरू, जतिखेर राजनैतिक कामका शिलशिलामा पिताजी जिल्लाका विभिन्न गाउँहरूमा गर्इरहनुहुन्थ्यो (उसो त अझै उहाँ सक्रिय राजनीतिमा क्रियाशिल हुनुहुन्छ, प्रायः घरबाहिरनै हुनुपर्ने हुन्छ) र घरमा मेरी निरूपाय आमा म र मेरो बर्षौटे भार्इको रेखदेखमा ब्यस्त हुनुपर्थ्यो । हामीलार्इ ख्वाउनु पिलाउनु, स्कृल पठाउनु वा गृहकार्य गराउनुका अलावा आमाले घरको सबै काम पनि गर्नुपर्थ्यो । वहाँ यन्त्रमानव झैं रातदिन काममा खटिरहनु हुन्थ्यो । मलार्इ मेरा पिताजीको तालदेख्दा त्यसैत्यसै रिस उठेर आउथ्यो । तथापी, न हामीले भनेर वहाँले राजनीति छाड्नुहुन्थ्यो न हामी वहाँले भनेर वहाँको ब्यस्त राजनैतिक रूटिनलार्इ स्वीकार गर्न सक्थ्यौं । अहिले अलि बुझ्ने भएपछि, तनावका बीचमा जीवनका बाल्यकालहरू गुज्रेर गए कि भन्ने लागेको छ । र, अहिले पनि यसो पछाडि पर्खेर हेर्दा मैले पाएको छु, जीवन त चलिनै रहँदो रहेछ आखिर !
एक, दुर्इ, तीन गर्दै जीवनका खुड्किलाहरू चढ्दै आउँदा २८ औ‌ खुड्किलामा आर्इपुगेछु । म हिजोको जन्मोत्सवहरूमा झैं आज पनि झसङ्ग भएको छु - ओहो, कति चाँडो यत्रो उमेरको भएछु ? हिजो झैं लाग्छ, फुलबारीमा अम्चुर (आँप) झार्न हिडेको, साथीहरूसँग च्यान्टेको तालमा पौडिन गएको, बेलाबखत पाइने दुर्इचार दाम जम्मा पारेर बाग्लुङबजारको पुजा चलचित्र मन्दिरमा फिलिम हेर्न गएको, हाडेचक्कु र छुर्पी बनाएर बेचेको, पिताजीको पार्टी जिन्दावाद र मावलीहरूको पार्टी मुर्दावाद भन्दै नारा लगाएको । भावनामा बग्दैबग्दै जाँदा फेरि व्यवहारिक हुन करै लाग्ने, त्यसैले भन्न करै लाग्दछ मलार्इ - मैले जे जति बाँचेको छु, एकदम अर्थवान जीवन बाँच्ने प्रयास गरेको छु । इमान्दारीताका साथ भन्नुपर्छ, जानेर मैले आजपर्यन्त कसैलार्इ चोट पुर्याएको छैन । कसैलार्इ ढाँटेर फाइदा लिएको छैन । के मैले यो साँच्चीकै सार्थक जीवन बाँचेको हैन त ? आज प्रश्न गर्न मन लाग्यो, मलार्इ - आफैसँग ।
मेरा पछिल्ला केहि जन्मोत्सवहरू मनाउँदै आउँदा मलार्इ लागेको छ, अब म अझ अरू जिम्मेवार र परिपक्व हुनु जरूरी छ । म मेरालागि मात्र हैन, अरू धेरैका लागि बाँच्नु जरूरी छ । म आफ्ना लागि जति सहयोगी छु अरूहरूका लागि पनि मैले बराबर सहयोगी हुने प्रयत्न गर्नु जरूरी छ । एउटा वर्षगाँठ थियो जैले मैले कृति विमोचन गरेर मनाएँ, अर्को एउटा चाँहि अनलार्इन काब्य गोष्ठी गरेर । र, यो वर्ष मैले विचार गरेको छु कि मेरो जन्मदिन अझ अरू सृजनात्मक तरिकाले मनाउने छु । पहिलो तरिका, विदेशमा रहेका मेरा सहपाठीहरूसँग आधा घण्टा विदेशमा आएर पढ्दाका चुनौती र अवसरहरुका बारेमा छलफल गर्ने र यूट्युब मार्फत त्यो छलफल संप्रेषण गर्ने । र, दोश्रो मेरा एक मित्र केपी अधिकारीले चाहेको बहिरा स्कृल निर्माणका लागि १०० यूरो सहयोग गर्ने । दोश्रो त म स्वयं आफैले एक्लै सम्पन्न गर्न सक्छु । तर पहिलो काम फत्ते गर्नका लागि मलार्इ मेरा साथीहरूको सहयोग आवश्यक छ । त्यसकारण यो र्इच्छुक मित्रहरूलार्इ यो फर्म भरी मलार्इ सहयोग गर्नुहुन सविनय अनुरोध गर्दछु ।
र, अन्त्यमा चर्चीत अंग्रेजी कवि रोबर्ट फ्रस्ट को यो भनार्इ पनि -
ekdam ramro xa.....balykal ko sandharva alik badi nai lekheko vaye rochok hunthyo vanne lagxa !!
प्रतिक्रियाका लागि अभिषेकजी यहाँलार्इ धेरै धेरै धन्यवाद । कुनै दिन विस्तारमा बाल्यकालसम्बन्धी पनि संस्मरण लेख्ने नै छु । यसैगरी नियमित ब्लग हेर्ने र पृष्ठपोषण राखिदिनु होला ।
निराजन जि, धेरै धेरै धन्यवाद । तपाइको अभियान सफल वनोस । म मेरो ठाउ बाट सहयोगको प्रयत्न गरीरहने छु ।
र सुदुर पश्रिममा बहिरा बिद्यालयकालागी यहाँको मात्रै नभै यहाँको तर्फबाट समेत सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।